အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်: Jan 17, 2010
Posted by ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) at Sunday, January 17, 2010 Sunday, January 17, 2010 Labels: သုတအဖြာဖြာ
ကမ္ဘာပေါ်ရှိ ရေတံခွန်များစွာတို့အနက် ထင်ရှားကျော်ကြားတဲ့ ရေတံခွန်များကို ဗဟုသုတအတွက် ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်..
ဒီရေတံခွန်က ဗင်နီဇွဲလားနိုင်ငံ Canaima အမျိုးသားဥယျာဉ်မှာရှိတဲ့ Angel Falls ပါ.. စုစုပေါင်း အမြင့်ပေ ၃၂၁၂ ပေမြင့်တဲ့ ကမ္ဘာ့ အမြင့်ဆုံး ရေတံခွန် တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်...
တောင်အာဖရိကနိုင်ငံရှိ အမြင့်ပေ ၃၁၁၀ ရှိ ကမ္ဘာ့ဒုတိယ အမြင့်ဆုံး Tugela Falls ပါ
ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံမှာတည်ရှိတဲ့ ဥရောပမှာ အကြီးဆုံးရေတံခွန်ဖြစ်တဲ့ Rhine Falls ပါ ဂျာမဏီနယ်စပ်နဲ့ မိုင်အနည်းငယ်သာကွားဝေးပါတယ်. ရိုင်းမြစ်ထဲကို ရေပမာဏ အများဆုံး စီးဆင်းတဲ့ ရေတံခွန်ဖြစ်ပါတယ်...
အမေရိကန် ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ် Yosemite အမျိုးသားဥယျာဉ်ရှိ Yosemite Falls ပါ.. အမြင့်ပေ ၂၄၂၅ မြင့်ပြီးတော့ မတူတဲ့ ပုံစံ ၃မျိုးနဲ့ စီးဆင်းတဲ့နေတဲ့ ရေတံခွန်ဖြစ်ပါတယ်..
အာဖရိကနိုင်ငံ Victoria အမျိုးသားဥယျာဉ် ရှိ Victoria Falls ပါ.. အမြင့်ပေအားဖြင့် ၃၅၀ သာရှိသော်လည်း အလွန်ကျယ်ပြန့် ကြီးမားတဲ့ ရေတံခွန် ဖြစ်ပါတယ်.. အကျယ်အားဖြင့် ၅၇၀၀ ပေ ကျယ်ဝန်းပါတယ်...
ပီရူးနိုင်ငံရှိ ကမ္ဘာ့ ပဉ္စမမြောက် အမြင့်ဆုံး Gocta ရေတံခွန်ပါ... ပီရူးအစိုးရရဲ့ ကြိုးပမ်းချက်နဲ့ သိပ်မကြာသေးခင်ကမှ ထင်ရှားကျော်ကြား လာတဲ့ ရေတံခွန်လဲ ဖြစ်ပါတယ်..
နော်ဝေးနိုင်ငံရှိ အမြင့်ပေ ၂၈၂၂ ရှိ Vinnufossen ရေတံခွန်ပါ.. ပင်မရေတံခွန်ကနေ ရေတံခွန်အသေး လေးဖြာ ခွဲထွက်စီးဆင်း နေပါတယ်..
အာဂျင်တီးနားနှင့် ဘရာဇီးနှစ်နိုင်ငံ နယ်စပ်ရှိ ကြီးမားထင်ရှားလှသော Iguacu Falls ဘရာဇီးနိုင်ငံ၏ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ၂၅%ကို ထုတ်လုပ် ပေးထားပြီး ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားများ အား အဆွဲဆောင်နိုင်ဆုံးသောရေတံခွန်တစ်ခုလဲ ဖြစ်ပါတယ်..
နယူးဇီလန်နိုင်ငံရှိ လူသိများထင်ရှားသော Sutherland Falls , ရေခဲတောင်များမှ စီးကျလာသော ရေများစုစည်းရာ ရေကန်ကြီးမှ ဖြာစီး ကျဆင်းလာသော ရေတံခွန်ကြီးတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်.
အမေရိကန်နှင့် ကနေဒါ နယ်စပ်ကြားရှိ ကမ္ဘာ့အလှဆုံး၊ ကမ္ဘာလှည့် ခရီးသွားများ အသွားများဆုံးသော Niagara Falls
http://www.treehugger.com/galleries/2009/06/amazing-waterfalls-around-the-world.php?page=7 မှ မျှဝေပါသည်...
Posted by ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) at Sunday, January 17, 2010 Labels: ရသစာစုများ
ကောင်မလေးနဲ့ ကောင်လေးနှစ်ယောက် လမ်းလျှောက်လာကြပါတယ်...
ကောင်မလေး ။ ။ နင်ငါ့ကို တကယ်ချစ်တာ သေချာလား
ကောင်လေး ။ ။ သေချာတာပေါ့..တကယ်ဘဲဟာ
ကောင်မလေး ။ ။ ဒါဆို ချစ်တယ် လို့နင်ငါ့ကို ပြောပါလား.. ငါကြားချင်လို့..
ကောင်လေး ။ ။ မပြောချင်ပါဘူး
ကောင်မလေး။ ။ဘာလို့လဲ.. နင်ပြောတော့ တကယ်ချစ်တယ်ဆို.. ဘာကြောင့် မပြောချင်ရတာလဲ….
ကောင်လေး ။ ။ အင်း… ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့…..
ကောင်မလေး။ ။ပြောစမ်းပါဟယ်.. နင့်ပါးစပ်က ပြောတာ ငါကြားချင်လို့ပါ..
ကောင်လေး ။ ။ဟင့်အင်း ..မပြောနိုင်ပါဘူး
ကောင်မလေးထံမှ ငိုရှိုက်သံ သဲ့သဲ့လေးထွက်လာပါတယ်.. ပြီးတော့ကောင်လေးကို ပြောလိုက်တယ်..
ဒါဆို နင်ငါ့ကို တကယ်မချစ်ဘူးပေါ့နော်…
ကောင်လေး ဘာမှပြန်မပြောပါဘူး.. သူတို့၂ယောက်လုံး တိတ်ဆိတ်စွာနဲ့ လမ်းဆက်လျှောက်နေကြတယ်.. ကောင်မလေး အိမ်ရှေ့ရောက်တော့ ၂ယောက်လုံး ရပ်လိုက် ကြပါတယ် ပြီးတော့ ကောင်လေးက ကောင်မလေးလက်ကို အသာ ဆုပ်ကိုင်လိုက်တယ်..
ကောင်မလေး။ ။ နင်ဘာမှ ပြောစရာမရှိတော့ဘူးလား
ကောင်လေး ။ ။ ငါပြောမဲ့ စကားကို နင်တကယ် ကြားချင်တာလား….
ကောင်မလေး။ ။ (ခပ်ရွံ့ရွံ့တွန့်ဆုတ်ဆုတ် လေသံလေးနဲ့ ) အင်း
ကောင်လေးက ကောင်မလေးရဲ့ ပုခုံးလေးကို အသာအယာပွေ့ဖက်လိုက်တယ်.. ပြီးတော့ နှဖူးလေးကို ဖွဖွညင်သာ နမ်းရှိုက်လိုက်ပြီး ကောင်မလေးရဲ့ နားရွက် နားလေးကို ကပ်ကာ နူးညံ့တဲ့အသံနဲ့ တိုးတိုးလေး ပြောလိုက်ပါတယ်..
ဘာလို့ငါမပြောချင်တာလဲဆိုတော့ နင့်ကိုချစ်တဲ့အချစ်တွေက “ချစ်တယ်” ဆိုတဲ့ စကားလေး နှစ်ခွန်းနဲ့ ငါ့အချစ်ကို လုံလောက်အောင် မဖော်ပြ နိုင်လို့၊ မပြည့်စုံနိုင်လို့ပေါ့ကွယ်…
မှန်ပါတယ်နော်.. တစ်ခါတစ်လေမှာ ချစ်တယ်ဆိုတဲ့ ရင်ထဲက ခံစားချက်ဟာ စကားလေး၂လုံးနဲ့ ပြည့်စုံလုံလောက်အောင် အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုဖို့ ခက်ခဲလွန်းနေပါ သေးတယ်... တစ်ယောက်ယောက်ကို ချစ်မိပြီဆိုရင် ချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ ကိုယ့်ဘ၀ကြီးတစ်ခုလုံး အချစ်ရနံ့တွေ ထုံမွန်းပြီး လှပ နေတတ်တယ်.. အရာရာကို ပျော်ရွှင်စရာ တွေနဲ့၊ လောကကြီးတစ်ခုလုံး သာယာ ကြည်နူးစရာရယ်လို့ထင်တတ်ကြပေမဲ့ ချစ်သူနဲ့ ဝေးကွာ၊ ခွဲခွာနေတဲ့အခါမှာတော့ လောကကြီးတစ်ခုလုံးဟာ အထီးကျန် စရာ၊ စိတ်ပျက်ငြီးငွေ့စရာရယ်လို့ မြင်တတ်ကြပြန်ပါတယ်.. ဒါဟာ အချစ်ဆိုတဲ့ အရာလေးရဲ့ စွမ်းဆောင်ချက်ကြောင့်ဘဲ မဟုတ်ပါလား… အချစ်ရှိရင် ကမ္ဘာ လောကကြီး တစ်ခုလုံးကို အကောင်းမြင်နေတတ်ပေမဲ့ အချစ်မရှိတော့တဲ့အခါ လောကကြီးတစ်ခုလုံးကို အဆိုးမြင်လာအောင် စွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့ ဒီအချစ်ကို ဘယ်လိုများ စကားလေး၂လုံးနဲ့ စာဖွဲ့လို့ပြည့်စုံနိုင်မှာလဲရှင်… ဒီတော့ စကားလေးနဲ့ ပြောဖို့ မလုံလောက်တဲ့အခါ ကိုယ်ဘယ်လောက် ချစ်ကြောင်း ချစ်သူကို သိစေဖို့အတွက် အမူအရာလေးတွေ ဂရုစိုက်မှုလေးတွေ ၊နားလည်မှုလေးတွေ ပြဖို့ လိုအပ်လာတာပေါ့နော်… ချစ်သူတွေ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် ပိုချစ်လာတဲ့ အခါ အကြင်နာ စိတ်တွေ ပိုလာကြသလို နားလည် သိတတ်မှုတွေလည်း ပိုတိုးလာကြပါတယ်.. ဒါဟာ အချစ်အကြောင်းကို ညွှန်းဆိုပြသ နေကြခြင်းသာ ဖြစ်ပါတယ်… စာဖတ်သူ များလည်း ကိုယ်ချစ်တဲ့သူကို ချစ်တဲ့အကြောင်း သူသိအောင် ပြောပြဖို့အတွက် စကားလေး၂လုံးနဲ့ မလုံလောက်တဲ့အခါ နားလည်မှု၊ စာနာဂရုစိုက်မှု ၊ ကြင်နာ သိတတ်မှုလေးတွေနဲ့ အချစ်အကြောင်းလေးတွေကို ပိုပြီး ပြည့်စုံ လေးနက်အောင် ပြောပြလိုက်ကြပါလို့…………
Author unknown ရဲ့ Three Words ကို ဘာသာပြန်ပါတယ်ရှုင်...